Miharatsy ny fanabeazana any Kazakhstan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jolay 2009 16:37 GMT
Ny 01 hatramin'ny 10 jona no niatrika ny fanadinana famaranana (UNT) ireo mpianatry ny ambaratonga faharoa any Kazakhstan-fanadinana atrehan'ny mpianatra voalohany kanefa manan-danja eo amin'ny fiainany. Ny salanisa ankapoben'ny mpanala fanadinana, araka ny nosoratan'i Zara, mpitoraka bilaogy iray, dia 74.9 , izany hoe nitombo isa 7 raha oharina amin'ny teo aloha. Niakatra ho 54.5% ny salan'isa ankapoben'ny mpianatra raha 36% izany tamin'ny taon-dasa. Amin'ny ankapobeny dia nihatsara ny vokatra raha oharina tamin'ny taona lasa rehetra, araka ny fanamarinany.
Milaza ny tarehimarika azony i Sadenova, araka ny antontan'isa eo am-pelantanany, ary nanamarika:
“Raha jerena ny vokatra tamin'ity taona 2009 ity dia mpiadina 1 amin'ny 7 no tsy nahazo isa 45, 1 amin'ny 9 no nahazo isa mihoatra ny 100 ary 1 amin'ny 13 500 no nahatratra ny isa ambony indrindra 125[ru].
Milaza kosa i Lord-Fame fa nisy ny hosoka nandritra ny fanadinana. Tsy misy dikany ny fandraràna ny fitondrana finday raha ampitahana amin'izao manaraka izao[ru]:
300 dôlara-izay no vola aloa amin'ireo mpiasan'ny fampianarana tsy hahatratrarana finday any am-pelantanan'ny mpianatra iray manala fanadinana. Toy izany ihany koa ny vola aloa any amin'ny faritany raha somary lafolafo kosa any Almaty sy Astana… Raha mandoa 1000 dôlara mantsy ianao dia mahazo matoky fa atoron'ny mpampianatra raha toa ka misy fanontaniana sarotra.